Xukun lagu ridey qof Sweden la damacsanaa fal argagaxiso – Banaadir weyne
Xukun lagu ridey qof Sweden la damacsanaa fal argagaxiso
Maxkamada Solna. Sawir: Fredrik Sandberg/TT
Maxkamada Solna ee magaalada Stockholm ayaa nin 46 jir ah ku xukuntay todoba sanno oo xabsi ah iyo in dalka laga masaafuriyo abid, iyadoona lagu eedeeyey inuu qorsheeynayey fal argagaxiso oo uu ka sameeyo Sweden.
Laba nin oo kale oo hore lagu eedayey isla dembigan ayay maxkamaddu wax ku weyday.
Afar nin oo ka mid ah lix nin oo lagu eedayey dembiyo la xiriira argagixisada ayay maxkamadu sidoo kale maanta ku xukuntay afar ilaa lix bilood oo xabsi ah.
Xeer iliaaliyaha kiiska ayaa ula jeeda inay maalgeliyeen ururka argagaxisada ee Daacish,
Patrik Alm, ahaana garsoorihii maxkamadda Solna ayaa yiri:.
-Ninka lagu xukumay todobada sanno wuxuu ku talo jiray in uu magaca Daacish wax ku qarxiyo.
Xukunkan ayaa ah kii ugu horeeyay ilaa la bilaabay sharcigii cusbaa ee argagaxisada. Kaas ayey ku qoran tahay in qofka maalgeliya urur argagaxiso ah la xukumi karo.
46 jirka lagu xukumay todobada sanno ee xabsiga ah ayaa dalkan ku noola wakhti dheer, islamarkaasna qoys ku leh Sweden. Sida uu sheegay Patrik Alm, garsooraha maxkamada Solna.
– In qaxootinomo dhab ah loo aqoonsaday may naga joojin in aanu maasaafurino marka uu dhameeysto ciqaabtiisa. Heeyada socdaalka ayaa u jeeda inaan dib loogu celin karin dalkiisii hooyo madama ay khatar tahay. Laakiin xaaladaasi wey isbedeli kartaa kollka uu u soo dhamaado xukunka lagu ridey, ayuu yidhi.
Xilligii guga ee 2018 ayay ahayd kolkii ay ciidammada nabad sugidda ee Säpo ay si lama filaan ah ku galeen guri ku yaala xaafadda Akalla oo dhacda waqooyiga magaalada Stockholm iyo dhisme ku yaala magaalada Strömsund ee gobolka Jämtland. Waana halkii ay ka bilaabatay dacwadda lagu soo oogey lixda nin oo maanta go’aankeeda lagu dhawaaqay.
Xeer ilaaliye Per Lindqvist ayaa qaba in ugu yaraan qeybo ka mid ah dacwadan looga qaadan doono abiil maxkamadda racfaanka.
– Radio Sweden, Laanta Af Soomaaliga | Taariikhda Daabacaada: 08/03/2019